बिजुलीको नयाँ महशुल : कसलाई कस्तो लाभ ? – HostKhabar ::
बिजुलीको नयाँ महशुल : कसलाई कस्तो लाभ ?
काठमाडौँ : नपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले असार १ देखि लागू हुनेगरी बिजुलीको महसुल समायोजन गरेको छ।
आयोगले समायोजन गरेको नयाँ महसल दरबाट उपभोक्ता तथा उद्योगी सबैलाई लाभ पुग्ने देखिएको छ। यद्यपी औद्योगिक ग्राहकका लागि नियमित शुल्कमा भने केही बृद्धि भने भएको छ।
उद्योगीहरुको मुख्य माग अविच्छिन्न बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्दै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेज भएपछि लागत न्युन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्वास गरेको छ।
नयाँ महसुलबाट कुन वर्गका ग्राहकलाई कस्तो लाभ मिल्छ ?
घरायसी ग्राहक :
१ देखि १० युनिटसम्मको ५ एम्पियरका ग्राहस्थ ग्राहकलाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क गरिएको छ । यसअघि यस्तो इनर्जी शुल्क निशुल्क थिएन। त्यसैले यसमा सहुलियत भएको छ। ग्रामिण क्षेत्रका ग्राहकहरुका लागि न्यूनम डिमान्डशुल्क ३० रुपैयाँ तिरेर यस्तो बिजुली उपभोग गर्न पाउनेछन्।
१० युनिट भन्दा माथि खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकहरुको विद्युत महशुल अधिकतम १० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ । यसबाट सहरी क्षेत्रमा भान्सामा विद्युतीय उपकरण चलाउनेहरुलाई सहुलियत हुने विद्युत प्राधिकरणले विश्वास गरेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल खारेज गरिएको छ । यसले गर्दा यो वर्गको औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरुको करिव ६५ प्रतिशतसम्म महशुल कम हुने प्राधिकरणको दावी छ।
यद्यपी औद्योगिक वर्गको ६६ केभीमा १० प्रतिशत महसुल भने बढेको छ। ठूला उद्योगका लागि चाहिने बिजुलीको महसुल न्यून भएपनि साना तथा मझौला उद्योग,कृषि तथा अन्य व्यवासयिक समूहका लागि चाहिने बिजुलीको महसुल भने यथावत रहेको छ।
सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकहरुको डिमाण्ड चार्ज पूर्णरुपले हटाएको छ।सामुदायिक खानेपानी ग्राहकहरुको ईनर्जी शुल्क प्रति युनिट ५.२० रुपैयाँबाट ४.२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ११ के.भी. का सामुदायिक खानेपानी ग्राहकहरुको महशुल रातिको समयमा ३।४० कायम गरिएको छ । जस अनुसार औषत खानेपानी ग्राहकहरुको महशुल ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुने छ ।
बिद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनमा पहिलोपटक शुल्क निर्धारण
विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशनको महशुल पहिलोपटक निर्धारण गरिएको छ। छुट्टै वर्ग निर्धारण गरी यसको महसुल निर्धारण गरिएको हो।
राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म को लागि ११ के।भी। को ईनर्जी शुल्क प्रति युनिट ४।२० रुपैयाँमात्र कायम गरिएको छ ।यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रति कि।मी। विद्युत खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणभन्दा बढीले कम हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरेको छ।